I-Wii, eyona nto ihamba phambili - i-Geofumadas
NgoJuni, 2009 egeomates My, Uhambo
Ekuhambeni kwam kutshanje unyana wam uya kuhamba kunye nam, kodwa ekubeni abahlobo be-embassy bezingagqibekanga ngexesha, sagqiba ekubeni ukuba i-console ye-Wii ifumaneke kuloo xabiso, ndiyakulifanisa.
Ngokomntu andinguye umdlalo weemidlalo ezininzi zevidiyo kubantwana, kodwa kuba nezidalwa ezinjengewe, ezihlonipha ukulawula kobuqili bomama abathi ziza kubukela i-TV kuphela iintsuku ezintathu ngeveki ... Ndicinga ukuba zinoxanduva ngokwaneleyo.
Indlela yokuthenga i-Wii
Kule migangatho, ayifuni phantsi kwe-$ 400, nangona kukho ukucatshulwa okuphantsi, kwi-Ebay kukho ukukhungatheka ukuba baqala kwi-$ 75 basekelo baze bafikelele kwi-$ 400 kunye nokuthunyelwa kwempahla.
Kodwa eUnited States kukho ezinye iindlela zokuthengisa izinto ezisetyenzisiweyo, kunye namaphephandaba eveki ephethe iinto ezingabikho banikezelayo kunye neentengiso zegaraji.
Enye yezinto endicinga ukuba yiyona nto ibhetele Craiglist, iindidi zeeplanzi ezinama-subdomains kwisixeko kwaye ngoku ifikelela kwihlabathi jikelele. Into enomdla kukuba ku Craiglist ungayifumana izinto ezikhululekile, kuba kukho abo banezinto abafuna ukuzilahleka, kodwa bayifumana ngakumbi ukukhululeka ukuyikhupha kunokuyihlawula kwi-trash; Ukuba ufuna ukuyijonga, jonga ipiyano, leyo eyayisezindlwini ezingamashumi ayisishiyagalolunye, ukhuni kunye neenkcukacha ezifakekileyo kwaye uza kubona ukuba zikhululekile ukuba uya kuzizisa.
Ngasekhohlo kwindlu yam yokuhlala. Zithatha nje kwaye zakho.
Indawo: Sula iLake
AKUSAKHO ukudibana nale poster ngeenkonzo okanye ezinye iimfuno zorhwebo
Ewe, ndandisiya nje houston.craiglist.com, ndibhalela amagama ambalwa, kwaye kwakukho uluhlu lweebhokhwe ezinombala ezinobumba ezithengisa amathoyizi abo.
Ngethuba lokuqala esibizayo, saphendulwa yinkwenkwana eyanikela ingcamango yokuba ngongqingili, andiyicaluli into yakhe, kodwa isimo sakhe sengqondo sasicasula xa wathi:
uyithatha emngciphekweni, endlwini yam engangeni ukungqina ukuba, inani liphela kwi-$ 150 kuphela.
Emva kokuchitha iipennies kwiintengiso ezithengiweyo, apho xa ulahlekelwa ikratshi lakho unokufumana izinto ezininzi, siye eWallmart ukukhangela imiyalelo yomfazi wam.
Kwakukho abafana ababini kwindawo yokudlala abanandipha i-Wii, bevela e-El Salvador kwaye basinika imiyalelo malunga nokokuzibuza nokubona ukuba kusebenza. Emva koko basinika amagama amabini ezitolo zokudlala apho bathengisa khona i-collateral, kwaye uTomtom wayemangalisayo.
Asizange senze, asizange sibe nexesha kunye nesiqinisekiso sanele.
I-202 ye-$, kuquka i-base, ulawulo olude kunye ne-nunchuk eyongezelelweyo, imidlalo ye-4 kunye ne-10 yexabiso elincinci ukuthenga omnye umdlalo.
Kwaye kuyimfuneko ukuyibeka kwisandla somthwalo, kwaye uyifake kwi-tray yesikhumulo sezindiza njengokungathi i-laptop. Ngento eyayinayo indleko yokumnika ubusuku bonke.
Abantwana bam babenomthwalo wokudibanisa, kwasebenza kakuhle kwaye xa sasingazi ukuba senze ntoni siye kwinqununu yomsebenzisi kwi-Intanethi.
Kwakudingeka ukuba ucinezele amaqhosha okuvumelanisa kokubili kunye nokukhupha kwaye ube kude kumitha engaphezu kweyodwa imitha ukuze ubone isikhombisi ... oku kwakukho kwincwadi.
Ukulungelekile, abantwana bayonwabile, ndabashiya umsebenzi wesikolo omele ufundwe kuwo wonke umqulu kwaye uchaze wona kum busuku kuba kukho ezininzi iingcebiso zonyango kunye nokunakekelwa okuyimfuneko. Ekugqibeleni, ndawacela ukuba baphando malunga nokuba le nto yavela njani kwaye kutheni kuthiwa yi-Wii.
Indodana yam ayiyi kukwazi ukuyisebenzisa kuze kube yinyanga enye, rhoqo kwaye kude kube yinto yokuphucula ibakala lakhe, yintsebenziswano kunye nentombi yam ibonisa ukudibanisa kwaye yanquma ukulinda. Ziyakuthandeka.
Ngubani ongayi kulinda mna ,: D.
Post edlulileyo«Edlulileyo Qhagamshelana, ii-2009 zeeminina ze-intanethi
Post Next Kutheni sibonga uNeogeógrafos njengeGoogleOkulandelayo "